Isbarbar dhigga Guuleed iyo Xaashi.
Wednesday 11th November 2020 11:39:32 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Marka la joogo Muqdisho dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaalilaand
Marka la joogo Muqdisho dadka dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaalilaand ee halkaa jooga oo duruuftooda siyaasiga ahi kala duwantahay waxa ugu hab maamuus sarreeya laba masuul oo reer Hargeysa ah. Waa Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi. Marka la eego dastuurka aan weli la ansixin waxa labada hab maamuus sarreeya Cabdi Xaashi. Haddii aanan khaldanayn guddoomiyaha aqalka odayadu waa qofka afraad ee Soomaaliya ugu hab maamuus sarreeya sharciyan. Sharciyad ahaan waa guddoomiyaha labada aqal kolka ay madal wada joogaan. Waa isla tabta JSL. Marka la eego siyaasad ahaanna maanta waxa Muqdisho ku awood badan Guuleed. Marka ay noqoto dhanka JSL ay ka soo jeedaan Guuleed waa masuul caadi ahaan la falgalsan siyaasadda gudaha Soomaalilaand ka jirta. Marka ay noqoto mawqifkiisa siyaasiga ah Guuleed ma aha nin mabda' ahaan si run ah uga soo hor jeeda qaddiyadda goonni isu taagga bulshada reer Soomaalilaand. Sida oo kale ma aha nin qof ahaan dagaal qaddiyadeed kula jira aragtida qaran ee Soomaalilaand. Dhinac kale waxa jira dagaallo bulshada JSL ka dhan ah oo xukuumadda Farmaajo soo qaadday oo uu Guuleed ka hawl galay in dagaalkaa la joojiyo.
Tusaale ahaan middii xoolaha nool ee kal hore iyo middii qoondada gaarka ah ee dhaqaalaha ay bixiyaan gaalada Soomaalida caydha siisa. Dhinac kalena Guuleed waxa uu saaxiib dhow la yahay Farmaajo oo ah madaxweynihii Soomaaliya soo mara goonni isu taaggii Soomaalilaand ka dib ee ugu adkaa qaddiyadda qaran ee Soomaalilaand.
Gees kale Xaashi waa nin sida Guuleed la falgashan xafiiltanka siyaasadda Soomaalilaand ka jira. Mar ay noqoto mawqifkiisa siyaasiga ah waa nin si buuxda uga soo hor jeeda qaddiyadda qaran ee JSL mabda' ahaan. Marka ay sidaa tahay Xaashi waxa uu ka mid yahay ragga dagaalka qaddiyadeed kula jira aragtida bulshada JSL. Marka ay noqoto waxtar siyaasi ah oo bulsho inta ogaalkayga ah waxa jirta in uu dadaal badan ku bixiyey furdaaminta muwaadin reer Soomaalilaand ah oo muddo badan u afduubnaa masuuliyiinta sarsare ee haayadda nabad sugidda Soomaaliya ugu dambaynna uu ku guulaystay.
Si kale aan u idhaahdee Guuleed waa nin siyaasad ahaan shalay u tegey Muqdisho halka Xaashi yahay nin mabda ahaan u joogay weligiis. Hadallada Guuleed waa hadallo siyaasi ah oo ay jaangoynayaan ijtihaadaadka siyaasiga ah ee markaa, iyo meeshaa taagan. Halka ay hadallada Xaashi yihiin hadallo mabda' oo aanay suurogal ahayn in ay isbeddelaan ilaa ay dhacdo in aragtidu isbeddesho. Gees kale labada masuul marka ay noqoto gudaha Soomaalilaand Xaashi kuma laha wax taageero ah shacabka Soomaalilaand dhexdiisa.
Ma arkaysid cid ammaanaysa ama meelahaa ka buunbuuninaysa. Ma arkaysid cid ku bogaadinaysa malkada uu Soomaaliya ka joogo ama dadaalka uu sameeyey. Cidda qudha ee xidhiidh ka dhexeeyaa waa siyaasiyiin faro ku tiris ah oo oo saqbadhka qol madow iyaga oo jooga ay kala war qaataan wax badanna aanay ku wada soconin. Maalintii uu sheegay in uu ka xun yahay in magaaladii Hargeysa uu ka taagan yahay calan aan ahay midkii uu jeclaa ee buluugga ahaa mid waxa u jawaabay nin aan anigu u aqaanno odayga qaddiyadda oo la yidhaahdo Boobe Yuusuf Ducaale. Halka taa beddelkeeda Guuleed magaalada Hargeysa meelaha ka qaar ka noqonayo siyaasiga ugu taageerada badan. Waa nin hadalladiisa siyaasiga ah iyo doorkiisa NN aad looga ammaano loogana buunbuuniyo Soomaalilaand meelalaha ninkaa laga taageersan yahay, maalmo kooban oo xafiiska si ku meelgaadh ah loogu igmaday wuu inna waalay. Maalin dhowayd oo dib loo magcaabay wuu inna qabsaday.
Maantadanna waxa uu boqollaal dhallinyaro ah u yaallaa profillada Faysbuugga. Guuleed ma aha qofkii kowaad ee reer Soomaalaand xilkan qabta, sida oo kale ma aha qofkii ugu siyaasi sanaa ee xilkan qabta, laakiin waa qofkii ugu saamaynta badnaa Soomaalilaand gudeheeda taageero iyo diidmo ba ee xilkan qabta.
Marka ay noqoto aragtida qaddiyadda Soomaalilaand Xaashi waa nin lumay laakiin keligii lumay oo aan cid kale la hallaabin, halka taa beddelkeeda Guuleed yahay nin aan aragti ahaan u lumin laakiin isaga sababtiisa ay u lumeen boqollaal dhallinyaro ah. Aan idhaahdo labada masuul midi keligii ayuu fitnoobay midna wuxu sabab u noqday in boqollaal dhallinyaro ahi fitnoobaan. Marka la joogo Soomaaliya, dadka xukuumadda Farmaajo taageersani maanta waxa ay taabacsan yihiin Guuleed halka dadka qaddiyadda Soomaaliweyn ay ku weyn tahay yihiin kuwo marwalba taabacsan Xaashi. Marka ay noqoto mustaqbalkooda siyaasiga ah, haddii Farmaajo soo laabto Guuleed waxa uu ku jiraa ragga ugu rejada wanaagsan.
Ma garan karro in uu ballanqaad haysto iyo nooca ballanqaad ee uu heli karo laakiin waxa hubaal ah in uu safka hore kaga jiro horena ugaga jiray ragga la shaqayn kara ama ay wada shaqaynsan karaan Farmaajo. Taa beddelkeeda Xaashi dawladda shaqaynaysa idilkeed ma jirto cid ay wada socdaan iyo cid ay isku siyaasad yihiin midna. Waxa bannaanka uga soo mahadceliya siyaasiyiin mucaarad ah hadba mararka ay u arkaan in uu wado qorshe dantooda gaarka ah taageeraya. Waxa se cad in uu sharci ahaan marka la joogo shuruucda Soomaalilaand Xaashi yahay masuulka ugu weyn ee ku dheggan in sharcigu shaqeeyo. Waana sababta keligii meel cidlo ah dhigtay. Waxa qudha ee raaca dhawr oday oo aqalkiisa ka tirsan marka ay qudhooda dantoodu dhanka Xaashi ula soo ciirto. Xaqiiqda durugsan ee marwalba run ahina waa in aan labadaa nin halkaa ku joogin awood rasmi ah iyo metelaad run. JSLna waa ka laba denbiile.
Waxaa Qoray Garyaqaan Guuleed Dafac
[Akhriso:-] Xoghayaha Xisbiga WADDANI Oo Is-barbardhig Ku Sameeyay Labada Siyaasi Ee Mahdi Guuleed Iyo Cabdi Xaashi.
Mahdi Guuleed Oo U Jawaabay Madaxweyne Ku-xigeenka Waddanka Kenya + Muxuu Qoonsaday ?
[Akhriso:-] Gudoomiye Cabdi Xaashi Oo Si Adag Uga Jawaabay Eedeyntii Mahdi Guuleed.
[Daawo:-] Maxaa Kala Qabsadey Wasiir Saleebaan Cali Koore Iyo Garyaqaan Guuleed Dafac ?
Mahdi Guuleed Oo Lagu Bahdilay Magaalada Muqdisho "Xamar Waxay Ku Caan Tahay Koriso, Kibriso Iyo Kufiso"
Donald Trump Oo Shaqadii Ka Eryay Xoghayihii Gaashaandhigga Mark Esper.
"Anigaa Soo Magacaabaya Guddiyada Doorashada Gobollada Waqooyi [ (Somaliland) ]" Gudoomiye Cabdi Xaashi.
Isbarbardhigga Awoodda Ciidan Ee Turkiga Iyo Faransiiska [ Gudaha Ka Akhriso ]